Nagu saabsan - Kingtai Craft Products Co., Ltd.
Kingtai Farsamada Products Co., Ltd.
Shirkadda wax soo saarka farshaxanka ee Kingtai, shirkadda soo saarta farsamada birta ee caanka ah, oo haysa in ka badan 20 sano khibrado kala duwan oo farsamo gacmeedyo ah, gabi ahaanba isdhexgalka warshadaha iyo shirkadda ganacsiga, sidaas darteed waxaan leenahay koox qaabeeysan iyo koox ganacsi.
Tan iyo markii la aasaasay, Liisamada iyo shatiyadaha aan helnay waxay ka badan yihiin 30 qaybood, dhowr ka mid ahna ay yihiin Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA iyo ISO9001.
Waxaan bixinnaa alaab dhaqameed pop ah, oo ay ku jiraan furaha furaha, billadaha, calaamadda pin, magnets, qaaddo cabbiraadda iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaan noqon karnaa mid dabacsan oo baahidaada ganacsi ah oo aan u soo saarno alaabada sida ku xusan sawiradaada naqshadeysan, shaybaarada la qaabeeyay, iyo shuruudaha faahfaahsan
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan u aheyn alaab-qeybiyeyaal Disney, Wal-Mart, Harry Potter iyo Universal 'Studios, Waxaan si toos ah ugu iibineynaa badeecadeena dukaamada oo aan dib ugu iibineynaa ganacsiga adduunka oo idil, baaxaddeena ballaaran weligeed kama baaqaneyso inay qanciso baahida macaamiisheena iyo had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa si loogu daro horumarkii ugu dambeeyay ee warshadaha wax soo saarka xayeysiinta.
KingTai-ga maanta wuxuu ku shaqeynayaa ujeedka adeegga macaamiisha-koowaad, wuxuuna ka qeybgalay Carwada Canton iyo Bandhigga Hong Kong sannado badan. Waxaan u fidinaa adeeg daacad ah macaamiisha, oo waxaan ku sii cusbooneysiineynaa iimaanka abuurista nolosha ee wanaagsan
Marka maxaan naloo dayin? Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan la kulmi doonno kana sare mari doonno wixii aad ka fileyso oo dhan.
Maxaa kale oo aan ku sameyn karnaa astaantaada?
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh dhaamanka dhaldhalaalka maqaarka dhaldhalaalka ah iyo biinanka daabacaadda dhijitaalka ah oo leh soo-jeedin deg deg ah. Ku naqshadeyso biinankaaga dhaldhalaalka adoo wata astaamo ama dhaqan u lahow sanado adeeg. Iyada oo qalabkeena midabaynta Pantone, waxaan hubineynaa in nashqadeyntaadu ay la soo baxeyso midabada saxda ah ee aad ku tala gashay.
Biinanka dhaldhalaalka ah ayaa la siin karaa shaqaalaha si ay u muujiyaan aqoonsi ama tabaruceyaal si ay u muujiyaan qadarintaada. Alaabtayada caadada ahi waa kuwo aad u waara oo leh tayada dahabka oo kale ah, oo ku habboon in hadiyad ahaan loo siiyo ama loo calaamadiyo shirkaddaada. Ku muuji sharaftaada USA biinankayaga Calanka Mareykanka. Marabtaa inaad faafiso wacyiga? Waxaan bixinaa biinanka ku habboon garaacista Wacyiga Ribbon, kaas oo lagu qaabeyn karo farriintaada gaarka ah.
Naqshadeyntaada, waxaad kuheli kartaa amarkaaga noocyo kaladuwan oo tayo sare leh. Laga soo bilaabo furaha silsiladaha, soo jiidashada, iyo isku xidhka dhagaha, astaamaha eyga, xarkaha suunka, iyo medallions, waxaan xal u heleynaa dhamaan baahiyahaaga xayeysiinta ama abaalmarinta ah.
Biinanka khaaska ah waa mid la awoodi karo oo si fudud loo qaabeyn karo. Iyagu waa hab fiican oo lagu abaalmariyo shaqaalaha, mutadawiciinta iyo ardayda, lagu muujiyo shirkaddaada astaan, lagu farxo kooxdaada isboortiga, loo dhiirrigeliyo naadigaaga, loona sharfo halyeeyada! Biinankayaga calanka ayaa si sharaf leh loogu sameeyay SHINA Daalac bogagayaga sawirrada si loogu dhiirrigeliyo abuuritaankaaga xiga.